कसरी मिर्गौला बेच्न बाध्य बनाउछन् दलालले ? – Kathmandutoday.com
कसरी मिर्गौला बेच्न बाध्य बनाउछन् दलालले ?
काठमाण्डु टुडे २०७१ फागुन १६ गते २:०८ मा प्रकाशित
काभ्रे,१६ फागुन – काभ्रको होक्सेका रामकुमार ठकुरीको घरमा सातजनाले मिर्गौला बेचेका छन् । ०५९ सालमा उनका बुबा कृष्णबहादुर ठकुरीले मिर्गौला बेचेका थिए । मिर्गौला बेचेपछि थलिएका उनको तीन वर्षअघि मृत्यु भयो । उनकी दिदी शान्ति थापा र भिनाजु अशोक थापा मगर, भाइ श्याम ठकुरी, बहिनी इन्दिरा थापा र दिदी पुना दाहालले पनि मिर्गौला बेचिसकेका छन् ।
होक्से गााँमा प्रलोभन र बाध्यतामा पारेर दलालले झण्डै तीन सयको मृर्गौला बेचिसकेका छन् । ४७ वर्षीय मोहन सापकोटाले ०५१ सालमा दलालको जालमा परेर भारतस्थित मन्द्रासको एक अस्पतालमा मिर्गौला बेचे । उनी अहिले थलिएका छन् ।
उनि भन्छन्, ‘मेरो रहर हौइन बाध्यता थियो, विदेशमा अलपत्र परँ । कति दिन त भोक भोकै बसेँ । अन्तिममा बाध्यतामा ६० हजारमा एउटा मिर्गौला दिएँ ।’ मिर्गौला बेचेपछि कमजोर हुँदै गएका उनी अहिले ओछ्यान परेका छन् ।